Archive du 20170622
Fiarovana amin’ny 26 jona Hampiasa « Drone » ny mpitandro ny filaminana
Ho faran’izay hentitra ny fitandroana ny filaminana amin’ny andron’ny fetim-pirenena ny 26 jona izao, indrindra fa ny ao anatin’ny kianjaben’i Mahamasina sy ny manodidina azy rehetra.
Hery Rajaonarimampianina Hampiesona any Imerintsiatosika indray ?
Manaitra ny mponina ny fiomankomanana any Imerintsiatosika efa ho andro vitsivitsy izao.
Faneva Raholdina Fieken-keloka sy Famelan-keloka vao fampihavanana
Nandamoka ny fampihavanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filohan’ny tetezamita Andry Rajoelina nokasaina hotanterahina,
Taratasin’i Jean Ampianaro tsara ny zaza
Ianareo ve ry Jean tsy nandia fianarana a ? Manakory sy manakory aloha ! Na ny zaza tsy tonga volana aza tsy hanao toy io fanaonareo io.
Honoré Rakotomanana sy Lalatiana Rakotondrazafy Hifampitady eny amin’ny fitsarana ?
Hiakatra eny anivon’ny borigady misahana ny ady heloka bevava (B.C) eny Anosy ny talen’ny famoahana sy ny tonian’ny fanoratana ao amin’ny gazety mpiseho isan’andro Free News anio.
Mpiasan’ny ladoany Hiverina hitokona Taorian’ny fitokonan
Taorian’ny fitokonana nandritra ny 2 andro nataon’ny Sendikan’ny mpiasan’ny ladoany (SEMPIDOU) ny 29-30 mey, narahin’ny fivoriambe tsy ara-potoana ny 01 jona dia nanome fe-potoana ny fanjakana hamaliana ny fitakiany hatramin’ny 26 jona ny sendika.
Fanjakana sy ny sendikan’ny mpitsara Tsy mbola milamina
Hiitatra any andafin’ny riaka ny akon’ny fitakian’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) noho ny teritery isan-karazany ataon’ny manampahefana amin’ny asan’ny mpitsara Malagasy.
Dia efa manao izay saim-patany sy hitsin’ny sainy sisa ny fanjakana Rajaonarimampianina satria mihevi-tena ho mafy sy matanjakana, ka tsy hisy hahaozongozona azy eo amin’ny sezany intsony,
Kaominina Antananarivo Renivohitra Tsy hisy lalana tapaka rahampitso zoma
Niteraka resabe teto an-drenivohitra nanomboka omaly ny fahatapahan-dalana etsy sy eroa, indrindra amin’izao ankatoky ny fetim-pirenena 26 jona izao.
Aretin’ny homamiadana Mitombo isa hatrany ireo voany
Tafakatra 94 tapitrisa ireo olona lasibatry ny aretina homamiadana maneran-tany ka ny valo tapitrisa no efa namoy ny ainy.
Seranam-piaramanidina vaovao ao Toliara Hahazaka mpandeha 250 000
Nijery ny fandrosoan’ny fanavaozana ny seranam-piaramanidin’i Toliara ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny harivan’ny talata 20 jona teo.
GANGSTABAB “Miala tsiny aminareo aho”
Resabe sy adihevitra na tany anaty toeram-piasana na tany anaty taksibe, indrindra fa tao anaty facebook nanomboka ny zoma teo fotoana nivoahan’ilay hiran’i Gangstabab (Rakotoarisoa Faniry Alban) mitondra ny lohateny hoe : « Atosika tsara ».
MAZAVAL RUN Nahavory tanora 3.500
Fahombiazana tanteraka no azo tamin’ilay hetsika “Mazaval Run” andiany voalohany nokarakarain’ny Okalou sy ny XXL ary ny Skol andro vitsy lasa izay tetsy amin’ny Stade annexe Mahamasina.